Salah, Mane & Aubameyang oo qaybsaday Kabtii Dahabka ahayd ee Gool-dhalinta EPL – Cadalool.com
Saddex weeraryahan oo Afrikaan ah
May 13, 2019 Caydaruus Omer
Ciyaaryahanada Sadio Mane iyo Pierre-Emerick Aubameyang oo labadooduba goolal dhaliyey kulankii gunaanadka horyaalka Ingiriiska, ayaa sidaas kula wadaagay kabtii dahabka ahayd ee gool dhalinta laacibka Mohamed Salah.
Labadii gool ee uu Aubameyang u dhaliyey kooxdiisa Arsenal ciyaartii Burley ayaa ka dhigtay mid la siman Salah iyo ciyaaryahanka ay Luverpool ka wada tirsan yihiin ee Mane, xaga gool dhalinta, mid kastaana dhaliyey 22 Gool.
Salah ayaa sidoo kale abaal marintan ku guuleystay xili ciyaareedkii u dambeeyey.
Waa tiradii ugu hooseysay ee kabta dahabka ah lagu qaado tan iyo xili ciyaareedkii 2010-11, markaas oo ay Dimitar Berbatov iyo Carlos Tevez kuwadaageen min 20.
Weeraryahanka reer Gabon, Aubameyang ayaa kadib guusha yidhi: “Waxaan Biladan la qaybsaday laba ciyaaryahan oo kale, waan ka helay, laba laacib oo waaweyn isla markaasna Afrikaan ah. Waxaanu metelaynay qaarada Afrika, taas ayaana cajiib ah.
‘DHAMAANTOOD WAA CIYAARYAHANADAYDII’
Tababaraha Liverpool, Jurgen Klopp ayaa yaab iyo amakaag ku sifeeyey ku soo biirida laacibkan hore ee kooxda Dortmund, kaas oo uu isagu kala soo wareegay naadiga Saint-Etienne sanadii 2013, markaas oo uu ahaa macalinka kooxda Westfalenstadion.
“Auba isna mala wadaagay? Tolow maloo helayaa saddex kabood oo dahab ah ? Waa arin fiican. Dhamaantood waa ciyaaryahanadaydii,” ayuu yidhi.